IMicrostation V8i: UkuSebenza ngokuSebenza-iGeofumadas
Ikhaya/ezintsha/I-Microstation V8i: Uhambo lokuhamba
I-Microstation V8i: Uhambo lokuhamba
Eyona ezintsha mna, ndikubonile nje, kunye intaka Microstation V8i nguye ibha yokukhangela eyaziwa ngokuba ngokwenene Task Uhambo unikela ubuso entsha kulawulo mhlawumbi ukuthumela imiyalelo ukuze lizisebenzise isitshixo kulo.
Iiprogram ze-CAD zinobungqina bokuba nemithetho yemiyalelo, eyayithandana nathi ngokuthandana nathi ziboya kodwa ukuba kwinqanaba le-orientation yezinto ezichasene neprogram ayisadingekile ukubazi kakuhle ngemiyalezo yombhalo.
Kwimeko yeMicrostation, imiyalelo ngokusebenzisa isitshixo-ngaphakathi yanyamalala ngokuthe ngcembe ngamaqhosha, kodwa ubunzima kukuba igcinwe phi imivalo emininzi ngaphandle kokuchitha indawo yokusebenza. Kwimeko ye-AutoCAD, ikhethe kwinguqulelo ka-2009 ekwiRibhoni, efana neOfisi yeMicrosoft, kuba imiyalelo iyahlula ngokwamaqela kwibha ephezulu ethe tyaba.
I-Microstation ithathe isigqibo sokuya kwibar ethe nkqo ebonakala ngathi sisisombululo esihle kuba kulula ukuyilawula ngohlobo lomthi. Kubonakala ngathi umbono ophumeleleyo kwaye notshintsho oluncinci oluncinci, inokufana ngendlela eyakhiwe ngayo kwi-AutoCAD Civil 3D.
Ibha iyasebenza ngokubhekisele kwiodolo yeempawu, ukuwa, kunye nokutsala naphi na kwiscreen. Ukwenza umboniso usebenze ngokulula, banonobumba onxulumene nabo, onokuthi xa ucinezela kwibhodibhodi, batyhile ngasekunene ... ngokulula nje, ngaphambi kokuba ucofe iqhosha ulinde ukuba wandise.
Emva koko kukho iiprofayili ezandulelwe ngaphambili njenge-Civil 3D, apho kuye kuxhomekeka kuyo izicelo ezifakiweyo ungakhetha izixhobo zazo ezinxulumene nemisebenzi eqhelekileyo. Qaphela ukuba ukufaka iGeopack ndingakhetha iprofayili kunye nemiyalelo enomdla kum, enje:
Enyanisweni nale nto ukuba babhema umgqomo kwisitayela saseDutch, kuba ukuziphatha okulungileyo kukuhle, ngokuphambene nomdala ukuba bekufuneka ukukhangela i-toolbars okanye imiyalelo yokuthayipha kwindawo engundoqo.
Ibha yomsebenzi inokuqwalaselwa ubuncinci kwizinto ezintathu, ezi zichazwe "kwindawo zokusebenza / ukhetho / ukukhangela umsebenzi". Ungacacisa ubungakanani be icon phakathi kwamancinci, aphakathi okanye amakhulu; isisombululo esihle samehlo ethu okanye esincinci esweni esweni.
Ingxoxo Ngale nto, le fomu indala igcinwa, okanye ubuncinci njengoko ibisenziwa kwiXM, ukusuka kwimivalo ephambili enokusetyenziswa kwizixhobo ezinxulumene noko. Ngendlela ye-V8 emva koko, kuba ndiyabona ukuba baninzi abangayibonanga i-XM okwangoku.
Ibhokisi leThuluzi. Olu luhlobo endibonise ngalo ngasentla.
Kwiimbono. Ngale ndlela, imivalo ixhonywe emaphethelweni eembono, inomdla kuba igcina indawo kodwa andikayifumani yonke ingqiqo kwaye kubonakala ngathi inokuba nzima.
Isisombululo esihle sokusingatha imiyalelo, njengento yokuqala ibonakala iyilungele ngokubhekiselele kumsebenzi.
Ndicebisa ukuba uzame, kunokwenzeka kwiqhosha lasekunene ukukhetha ukuba ibar yesixhobo iboniswe njengebhari enye, kwaye kulungile kakhulu ukuba zingaboniswa ngohlobo lwepaneli, uluhlu okanye ii-icon. Ezi ndawo zinokuzimela ngebha nganye, zinokulungiswa kwaye zibone ukhetho lokusebenzisa imowudi kuyo yonke imivalo.
Ngokufutshane, ezintsha elungileyo kakhulu kodwa Bentley uya uzithengise Yomelelani kunene le mveliso kuba njengokuba sisazi, abasebenzisi abaninzi kunzima bafuduka, kungekhona kuba befuna ukuthatha uguqulelo entsha kodwa ngenxa yokuba baziva bonwabile kunye noko sele unayo (malini okanye yintoni ukuba P kuyo buhlungu).
Okwangoku ndibabonile abantu basebenzisa iMicrostation J, kunye neMicrostation SE ... kwaye bayayithanda !!! Ke phakathi kwe-V8, i-XM kunye ne-V8i sinokuba nemeko yabathengi abangafuniyo ukutshintsha ngenxa yendlela yothungelwano, ukuba inkqubo yakho iyaqhubeka nokuphatha ifomathi ye-V8 efanayo eyaphunyezwa ngaphezulu kweminyaka emi-6 kwaye ifuduka ngaphandle kwe-ELS kuthetha iindleko. engaphezulu.
Utshintsho olungaphaya komdibaniso esiya kubona kamva, kuba ngoku ndikhenketho kwakhona kwaye unxibelelwano olungenazingcingo luyadandathekisa. Ndiyakuxelela, ndiyifakile i-V8i kwifayile ye- Acer mini mini... ngokumangalisa ihamba kakuhle kwaye ixazulula i-crazy yami indlela yokuhamba, kufuneka uchaze ubungakanani bezithonjana ezincinci kuba andinayo indawo eninzi.
Ukususela kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD, kulula ukuze
Intengiso yezona zikhulu zeGeo
Ewe, i-microstation iyancipha. Enyanisweni akukhona ukuba kukho ukuchasana nokutshintshwa, kwenzeka ntoni ukuba ifom ye-mstation kwimithetho yayo ayinanto engqiqweni. I-Autocad iphakamileyo kakhulu kwiinkalo ezininzi. Ngaphandle kwenguqu ye-2011. Kwaye abafuni ukutshintsha kuba kukho ezininzi izixhobo ezingekho kwi-Mstation. Ixesha elilahlekileyo lilahleka ukhetha iimpawu, kunye namanyathelo aphindaphindiweyo okungazenzisiyo kwi-autocad. Enye ingalunganga yinkqubo kwi-VBA, i-AUTOLISP, i-DCL elula kwi-Autocad, kodwa kwi-Mstation iyintloko kwaye ayinalo lonke amandla. Ukuphathwa kwe-3D ye-Autocad 2011 kukugqamile kakhulu kwiindawo, izinto ze-3D, imibono, njl.
I-Mstation incinci kwisakhiwo sayo kune-autocad, kodwa ayigcina ukulungiswa kwemidwebo, njenge-scale line, ukulungiswa njl. Kufuneka uhlale uqwalasela idatha yezinto eziguqukayo kunye ne-autocad engenzekiyo.
Akukho REFEDIT yokuhlela iibhloko (iiseli kwi-mstation) ngexesha lokwenyani. Akukho ziParametri, iibhloko ezinamandla, ukufakwa kwetafile, ukuthunyelwa kwetafile ukugqwesa, ukuqokelela idatha, i-3D yokuhambisa inqanawa, i-GIZMO 3D njalo njalo… .. ukuya kubomi obungapheliyo. I-Mstation iyadika.
Ngeprogram ungenza imidwebo ngokukhawuleza, ii-20 amaxesha ngokukhawuleza kuneMstation kunye ne-2 okanye i-3 kuphela. Ukongezelela unokwabelana ngokukhawuleza kwedatha nge-EXCEL, njengokuba ubude bomgca, ubukhulu, ubunzima, iilebula, izicatshulwa, ngokukodwa zonke iinkcukacha zamashishini zingathunyelwa.
Uncedo aluncinane kakhulu kwi-Mstation. Ayikho imizekelo ebalulekileyo. I-autocad ine-nkcazelo yento yonke kwaye ibonisa zonke izihloko ezihambelanayo, ii-tutorials zevidiyo, iziguquko, imiyalelo, imizekelo, izicelo, i-links zewebhu, njl. Andize ndibe neengxaki ekuqondeni ukuba umyalelo wenzani kwimiyalezo yayo yokucwangcisa.
I-Mstation yi-basophony. Ndiyisebenzise kuphela kuba umthengi ucela yona, kodwa xa kunomsebenzi omncinane ndimkhetha i-Autocad.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-BIM Summit 2019
Inkqubo yeHydrosanitary yezifundo zisebenzisa iRevit MEP
Funda ukusebenzisa i-REVIT MEP kuyilo loFakelo lweSanitary. Wamkelekile kule khosi kufakelo lweSanitary ngeRevit MEP ....